Saturday August 30, 2014 - 20:43:53 in Wararka by Web Admin
Weerar yahanka kooxda Monaco ee Radamel Falcao ayaa cadeeyay inuu ku biirayo kooxda Real Madrid.Sidii aan galabta idiin soo gudbinay Falcao ayaa laga waayay kooxdiisa wajahaysay kooxda Lille. Falcao ayaa xagaaga oo dhan lala xidhiidhinayay kooxo bada
Weerar yahanka kooxda Monaco ee Radamel Falcao ayaa cadeeyay inuu ku biirayo kooxda Real Madrid.Sidii aan galabta idiin soo gudbinay Falcao ayaa laga waayay kooxdiisa wajahaysay kooxda Lille. Falcao ayaa xagaaga oo dhan lala xidhiidhinayay kooxo badan oo qaarada Yurub ah wuxuuna dhawr jeer sheegay inuu ku riyoodo kooxda Real Madrid.kooxaha Arsenal, Man united, Man City, Liverpool iyo Juventus ayaa sidoo kale lala xidhiidhinayay weerar yahankan ree Colombia.
Hadda ayuu 28 jirkani soo gabagabeeyay wararkii suuqa ee hadba koox lagula xidhiidhinayay, wuxuuna cadeeyay sida uu daacad ugu yahay kooxda Real Madrid wuxuuna sidan ku cadeeyay qoraal uu ku qoray bartiisa twitterka inkasta oo uu markiiba ka saray.
Monaco ayaan wali ka hadlin arinta cusub ee Falcao lamana oga inay warkan isla ogyihiin iyo inkale.Falcao ayaa qoraalkiisa ku yidhi: " Real Madrid waa riyo ii rumawday”.Dhinaca kale Real Madrid ayaan wax war ah laga hayn.